BBC Somali - Cayaaraha - Dood iyo faallooyinka dhinaca cayaaraha ah
16 Maarso, 2011, 22:01 GMT 01:01 SGA
Dood iyo faallooyinka dhinaca cayaaraha ah
Barnaamijka Cayaaraha Sabtida, waxaanu ku soo qaadanaynaa, Maadaama aysan jirin cayaaro toos ah ee tartanka England Premiership:
Tartanka FA Cup oo galabta la cayaarayo.
Dood ku saabsan England Premiership.
Dood cayaaraha Europe Champions League
iyo Faallooyin cayaaraha la xiriira guud ahaa.
Ka qaybgalayaasha Doodda Cayaaraha qaybta England Premiership
Dhalinyarada ka qaybgalaysa doodda cayaaraha Permiership
Maxamed Ciise Digeeye
Maxamed Maxamuud Deysane
Maxamed Maxamuud Deysane, Cabdiraxmaan Koronto iyo Digeeye
Marka ugu horaysa ayaanun eegaynaa tartanka FA Cup ee wareegga lixaad ay kooxuhu ku tartamayaan, kadina dood dheer oo ku aadan tartanka England Premiership,
Laba cayaarood oo tartanka ku tirsan ayaa maallintaas dhacayay.
Birmingham iyo Bolton ayaa wada cayaaray.
Cayaarta labaad oo ah mid aad loo wada sugayay, ayaa 8:15 daqiiqo saacadda africada bari dhexmartay kooxaha Man U iyo Arsenal. Arsenal waa laga badiyay.
Waa labada koox ee isku haya tartanka England Premiershipka Hogaamintiisa oo ay u dhexayso 3 dhibcood oo kaliya iyadoo Man U oo saraysa ay cayaar dheer tahay, halka Man U 29 kulan ka dheeshay Arsenal 28 ayay cayaartay.